Latest online leaks about the OnePlus 8T: which will come out on OCT 14 as per rumors. ﻿
Latest online leaks about the OnePlus 8T: which will come out on OCT 14 as per rumors.
သတင်းများအရ OCT 14 ရက်နေ့တွင်ထွက်ရှိလာနိုင်သည့် OnePlus 8T အကြောင်း နောက်ဆုံးပေါ် leak များ
နည်းပညာရူးသွပ်သူအများစုအကြိုက်ဆုံး smartphone တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OnePlus 8T ဟာ ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကောလဟာလတွေ ပျံ့နှံ့နေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကောလဟာလတွေအရ အဆိုပါဖုန်းဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ Nord နဲ့ ဆင်တူမှာဖြစ်ပြီး 48-megapixel Sony IMX689 sensor primary lens, 16-megapixel ultra-wide sensor, 5-megapixel macro lens အသစ်နဲ့အတူ 2-megapixel depth sensor/portrait lens အစရှိတဲ့ ကင်မရာ ၄လုံးပါဝင်တဲ့ setup နဲ့ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အဆိုပါဖုန်းဟာ 128GB နဲ့ 256GB အမျိုးအစား ၂ မျိုးထွက်ရှိလာနိုင်ပြီး 8GB နဲ့ 12GB RAM အသီးသီး ပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Processor အနေနဲ့ကတော့ Snapdragon 865/ 865+ အမျိုးအစား processor များကိုအသုံးပြုသွားနိုင်ဖွယ်ရာရှိနေပြီး Display အနေနဲ့ကတော့ 90Hz refresh rate ရှိသော ဖုန်းဖြစ်တဲ့ OnePlus 8 နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်မှုရှိစေမယ့် 120Hz refresh rate ရှိတဲ့ display ကိုအသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ထို့အပြင် ဖုန်းအား 0% မှ 100% အထိကို ၃၉မိနစ်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းပေးနိုင် မယ့် 65W Warp charge တစ်ခုလဲ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး USB Type-C ports များကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကာ battery capacity အနေနဲ့ကတော့ 4500mAh ပမာဏရှိတဲ့ battery များကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပေါက်ကြားမှုများအရ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဈေးနှုန်းများအရတော့ နောက်ဆုံးသိရှိရချက်များအရ 8GB/ 128GB ဖုန်းအတွက် ယူရိုငွေ ၆၉၉ (ဒေါ်လာ ၈၁၅ခန့်) နဲ့ 12GB/ 256GB ဖုန်းအတွက် ယူရိုငွေ ၇၉၉ (ဒေါ်လာ ၉၃၀) ခန့်ကျသင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။